के हो मुटुरोग ? कसरी बच्ने ?::Online News Portal from State No. 4
के हो मुटुरोग ? कसरी बच्ने ?
शरीरका स्वचलित अंगमध्ये मुटु जटिल र अति महत्वपुर्ण प्राकृतिक अंग हो । यो हरपल चलिरहन्छ । छातीभित्र धड्किरहने यो सानो अंगले शिरदेखि पाउसम्म महत्वपूर्ण भुमिका निर्वाह गरेको हुन्छ । विश्वव्यापी रूपमा भइरहेको औद्योगीकरण, वातावरण अमैत्रृ बिकास र मानव जीवनमा भइरहेको जीवनशैलीको परिवर्तनसंगै मुटुरोग मानव मृत्युको पहिलो कारण बन्न पुगिरहेको छ । पुरुष–महिला दुवै जनालाई असर पार्ने यो रोग अहिले पनि बढ्दो क्रममा छ । मुटुरोग प्राणघातक भएपनि ८० प्रतिशत हृदयघात (जभबचत बततबअप) रोकथाम गर्न सकिन्छ । विश्व मुटु महासंघका अनुसार मुटुरोगका कारण विश्वभर बर्सेनि १ करोड ८० लाख मानिसको मृत्यु हुने गर्छ । मृत्यु हुनेहरूमध्ये ८० प्रतिशतभन्दा बढी विकासोन्मुख देशका विपन्न वर्गका जनता पर्छन । विश्व स्वास्थ्य संगठनले सन् २०२० सम्ममा विकासोन्मुख राष्ट्रहरूमा मुटुरोग महामारीकै रूपमा फैलिने भविष्यवाणी गरेको छ । मुटुरोग भन्नाले धेरैजसोले हृदयघात र हार्टफेललाई बुझ्ने गरेको पाइन्छ ।
कोरोनरी मटुको रोग भनेको मटुका मांशपेशीमा रगत प्रवाह गर्न कोरोनरी रक्तनलीहरू साँगुरो वा बन्द हुनाले लाग्ने रोग हो । ह्यदयघात पनि एक प्रकारको कोरोनरी मुटुरोग नै हो । यो रोग विशेष गरी ४० वषर्भन्दा बढी उमेरका मानिसहरूमा देखिन्छ तर आजकल युवा उमेरका मानिसहरूमा पनि देखिन थालेको छ । नेपालमा मुटुरोग बढ्ने क्रममा जारी छ । हाल करिब १५ प्रतिशत जनतालाई कुनै न कुनै प्रकारको मुटुरोग भएको अनुमान गरिएको छ । नेपालमा १० वर्षको अन्तरालमा मुटुरोगीहरूको संख्यामा पाँच गुणाले वृद्धि भएको छ । हाल नेपालमा १८ वर्ष उमेरमाथिका करिब २० प्रतिशतलाई उच्च रक्तचाप, ३ प्रतिशतलाई कोरोनरी मुटुको रोग, १० प्रतिशतलाई मधुमेह छ । यस्तै स्कुल जाने उमेरका करिब ०.२ प्रतिशतलाई बाथमुटुको रोग र त्यत्ति नै अनुपातमा जन्मजात मुटुको रोग छ ।
मुटुरोगका लक्षणहरूबारे धेरैलाई जानकारी छैन, अर्कोतर्फ सबै मुटु रोगीलाई लक्षण पनि नदेखिने हुन्छ । त्यसैले मानिसहरू ढिलागरी उपचारका लागि अस्पताल वा डाक्टरकहाँ जान्छन् । छातीको बीच भागमा पीडा हुनु, परिश्रम गर्दा दम बढ्नु, खुट्टाहरू सुन्निनु, मुटु बेतालले धड्किनु, चक्कर लाग्नु, धाँटीको रक्तनली फुल्नु वा चल्नु, बाल्यकालमा जोर्नीहरू दुख्नु र साथमा ज्वरो पनि आउनु, जिब्रो, औंलाका टुप्पाहरू नीलो हुनु आदि सबै मुटुरोगका लक्षणहरू हुन सक्छन् । शारारीक परिश्रम गर्ने वा मानसिक तनावमा छातीको बीच भागमा वा देब्रेतिर भएर ढुंगले थिचेको जस्तो अनुभव हुन्छ । आराम गरेपछि हराएर जान्छ । यो लक्षणलाई एन्जाइना भनिन्छ । कसै–कसैलाई भने पहिलोपटक नै असह्य तरिकाले छाती दख्नु, देब्रे छातीतिर झनै श्वास फेर्न गार्हो हुने, चिटचिट पसिना आउने, वाकवाक लाग्ने जस्ता हृदयघातका लक्षणहरू देखिन्छन्, जसमध्ये एक तिहाई बिरामीको अस्पताल पुग्नभुन्दा अगाडी नै मृत्यु हुन्छ ।
मुटु दुख्ने धेरै कारणहरु हुन्छन् । विशेषगरी मुटुको वरिपरी छातीको बीच भागमा दुख्नु मुटु रोगका कारण हुन् । मुटु रोग विभिन्न किसिमका हुन्छन्, सामान्य भाषामा भल्भ मुटु रोग, बाथ मुटु रोग, मुटु फेल्योर, कोरोनरी मुटुरोग र हृदयाघात, जन्मजात मुटु रोग, उच्च रक्तचाप, मस्तिष्कघात र हृदयघातलगायत मुख्य हुन् । तसर्थ मुटु दुख्ने प्रमुख कारण भनेकै विभिन्न प्रकारका मुटु रोग हुन् । अन्य कारणहरुमा मानसिक तनावसँग सम्बन्धित मुटु हल्लिने रोग जसलाई हामी एञ्जाइटी भन्छौं । यो पनि मुटु दुख्ने अर्को कारण हो । मुटु रोगबाहेक अन्य कारणहरुमा छातीको मांशपेशी खुम्चेर, फोक्सोको बाहिरी झिल्ली च्यातिएर, मानसिक तनाव बढि लिएमा छाती टाइट हुने र मुटु दुखेको अनुभव हुने गर्छ ।
जभबचत बततबअप यदि मुटुको भल्भ थुनियो भने वा सानो भयोभने मुटु दुख्न थाल्छ । विशेषगरी मुटुको धमनीमा रोकावट भयो भने छातीको बीच भागमा बेस्सरी मुटु दुख्न थाल्छ, यस्तो अवस्थामा हिंडडुल गर्दा झन् बेस्सरी दुख्न थाल्छ । शरीरमा रक्त सञ्चार कमी भयोभने पनि मुटु दुख्न थाल्छ । एन्जिनालाई पनि मुटु दुख्ने अर्को कारण मान्न सकिन्छ । छाती गह्रौं भएको, छातीमा कसैले वा केहीले च्यापेको जस्तो लाग्ने, छाती पोलेको, छाती सुन्न परेको, छाती चिलाएको लगायतका सबै लक्षण एन्जिनामा पर्छन् । जसको कारण मुटु दुख्न थाल्छ । तसर्थ मुटु दुख्ने कारण मुख्य गरी मुटुरोग नै हो । त्यसैले हामीले मुटुरोगप्रति बढि सचेत हुनुपर्छ ।
कारण र बच्ने उपायहरुः
मुटुको रोगको परिवारीक इतिहास भएको, अत्याधीक मोटोपन भएको, शारीरिक रुपमा कम शक्रिय हुने, अत्याधीक कोलस्ट्रोल हुनु, अत्याधिक ब्लडप्रेसर हुनु, धुम्रपान सेवन गर्नु, लागु पर्दाथको सेवन, डाइबेटिजको रोगी हुनु लगायतका कारणले मुटुरोग लाग्छ । त्यसैले धूम्रपान साथै सूर्तिजन्य पदार्थको सेवन नगर्ने, नियमित शारिरीक व्यायाम गर्ने, सागसब्जी र फलफूल बढी सेवन गर्ने, मासु, चिल्लो, बोसोयुक्त खानेकुरा, जंकफुड कम गर्ने, मानसिक तनाव कम गर्ने, तौल ठीक राख्ने, भुँडी बढ्न नदिने र नियमित रूपमा चिकित्सकसँग परीक्षण गराई आवश्यक सल्लाह लिने गरेमा मुटु रोगबाट सजिलै बच्न सकिन्छ ।
त्यसैगरी सेकेण्डह्यान्ड धूम्रपान (अर्थात तपाईको छेउमा रहेर कसैले चुरोट पिउनु) को सम्पर्कमा पर्नु पनि स्वास्थ्यको लागि हानिकारक हुन्छ । मुटुका केही रोगहरू जस्तैः उच्च रक्तचाप, उच्च रक्त कोलेस्टेरोल, मधुमेह आदिको कुनै लक्षणहरू नहुन पनि सक्छ । यी रोगहरू परीक्षण गरेपछि मात्र पत्ता लाग्छ । मानिसको आकस्मिक मृत्यु धेरैजसो मुटुरोगकै कारणबाट हुन्छ । नियमित रूपमा आफ्नो ब्लडप्रेसर नापी राख्नुस्, रगतमा ग्लुकोजको मात्रा बढ्नु हृदयघात हुने सक्ने सम्भावना बढ्नु हो त्यसैले यदि तपाईलाई मधुमेह (डाइबिटिज) छभने आफ्नो रगतको ग्लुकोजको मात्रा नियन्त्रण गर्नु एकदमै आवश्यकता पर्दछ । त्यसैगरी रगतमा हुने कोलेस्ट्रोलको मात्रा बढ्नु पनि मुटुको लागि घातक हुन्छ । स्वस्थ खाना, शारीरिक व्यायाम र आवश्यक परेमा औषधीको सेवन गरेर पनि कोलेस्ट्रोलको नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । बेला–बेलामा रगतमा कोलेस्टेरोलको मात्रा र मुटुको जाँच गराउनुपर्छ ।
मुटु रोगको घरेलु उपचारहरूः
एउटा अमला र एउटा मिस्र्री लिनुहोस् र त्यसलाई पिनेर धूलो बनाउनुहोस् र मिसाउनुहोस् । यसको प्रयोग हरेक बिहान दुई चम्चा पानीसँग प्रयोग गर्दा मुटुको रोग र ब्लड प्रेसरमा पनि कमी आउने छ । एउटा प्याज लिनुहोस् र त्यसलाई पिनेर त्यसको जुस निकाल्नुहोस् । अब दुई चम्चा प्याजको जुस र शुद्ध मह मिसाउनुहोस् र यसको प्रयोग दिनमा तिन पटक प्रयोग गरेमा ब्लड प्रेसर र मुटुको रोग भएकोलाई धेरै फइदा गर्दछ । सधँै खाना खाँदा काचो प्याज वा लसुनको प्रयोग गरेमा यसको समस्या कम हुँदै जानेछ । एक चम्चा अर्जुना पौडरको सेवन दिनको एक पटक पानीसँग गर्नुहोस् । एउटा अर्जुनाको रूखको बोक्रालाई पानीमा उमालेर खानाले पनि यो रोग कम हुँदै जानेछ । दुईवटा काचो लसुन बिहान उठ्ने बितिकै पानीसँग खानुहोस् । यसले यो रोग हटाउन धेरै मदत गर्दछ ।
एक ग्लास दुधमा आधा चम्चा बेसार मिसाउनुहोस् र यसको सेवन दिनको दुई पटक गर्नुहोस् । यसले मुटुको रोगलाई घटाउन धेरै मदत गर्दछ । एक कप कागतीको जुस, एक कप अदुवाको जुस, एक कप लसुनको जुस र एक कप स्याउको जुस लिनुहोस् र सबैलाई मिसाउनुहोस् र त्यसको माथिबाट तिन कप मह राखेर मिलाउनुहोस् र एउटा बोतलमा राख्नुहोस् । हरेक बिहान एक चम्चा यसको प्रयाग गर्नुहोस् । यसो गर्दा यसले मुटुको रोगमा धेरै कमि ल्याउने गर्दछ । अर्जुन रूखको बोक्रालाई पिनेर पाउडर बनाएर त्यसको पाउडर एक कप पानी र एक कप दुधमा राखेर पकाउनु र बाक्लो भएपछि यसलाई छानेर यसको सेवन हरेक दिन बिहान खाली पेट वा राती सुत्न अगाडी एक पटक प्रयोग गर्दा यसले यो रोग हुनबाट रोक्छ र कम पनि गर्दछ । एक कप काचो लौकाको जुस, तुलसीको पातको जुस, पुडिनाको जु्स र बिरे नुन मिलाएर र त्यसको सेवन दिनमा एक पटक ३ महिना नियमित प्रयोग गर्नाले यो रोगमा कमि आउने छ र ब्लड प्रेसरमा पनि कमि ल्याउने छ ।